Akon’ny Fihaonamben’ny UNESCO – METFP
Akon’ny Fihaonamben’ny UNESCO
Nahafahana nifantoka momba ireo olana natrehan’ny fanofanana sy ny fanabeazana ary ny fikarohana, noho ny valan’aretina Covid-19, ny lahadinika mahakasika ny « Programme de développement des capacités pour l’Education » (CapED) ; nandritra ny Fihaonamben’ny UNESCO, andiany faha-41.
Isan’ireo mpandray anjara nifampizara ny ezaka sy ny vina ary ny politikan’ny fanofanana arak’asa Ramatoa Minisitra VAVITSARA RAHANTANIRINA Gabriella.
Ho an’i Madagasikara manokana, ny Fampananan’asa no nifantohan’ity programa CapED ity. Teo ihany koa ny fametrahana ny « Validation des Acquis de l’Expérience » (VAE), hisitrahan’ireo tanora diplaoma ka hivoatra eo amin’ny tontolon’ny asa izay efa misy azy.
Nozarain’ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy Fanofanana arak’Asa ihany koa ny momba ny fanofanana fohy ezaka entina mamaly avy hatrany ny filan’ny tsenan’ny asa sy mamorona asa mivantana, indrindra ho an’ny tanora sy vehivavy iharan’ny herisetra ary ireo olona manana fahasembanana. Tanora maherin’ny 300.000 isan-taona mantsy no omena fiofanana, araka ny toromarika napetraky ny Filoham-pirenena RAJOELINA Andry.
©️SCOM METFP/Novambra 2021